Askar lagu dilay Sucuudiga - BBC News Somali
Askar lagu dilay Sucuudiga
Wasaaradda arrimaha gudaha Sucuudiga ayaa sheegtay in dabley aan la aqoonsanin ku dileen laba askari oo boolis ah oo roondo ku jira magaalada Dammaam ee ku taala bariga dalka. Waxayna wasaaraddu weerarkaa ku tilmaantay in uu ahaa "fal aragagixiso".
Af-hayeenka wasaaradda arrimaha gudaha oo ay soo xigatay wakaaladda wararka Sucuudigu, ayaa sheegay in labada askari ay ku jireen hawl gal roondo ah markii goor dambe oo habeennimadii sabtida ah rasaas lagu furay.
Saraakiisha Sucuudigu weli cidna kum aysan eedaynin weerarkan, laakiin waxaa hore u dhacday in kooxda la baxday Dowladda Islaamku ay sheegteen weerarro kan la mid ah.
Weerarkan Dammaam ka dhacay wuxau ka mid noqonayaa weerraro is daba joog ah oo beryahan dambe ka dhacayey gobolka bari ee ay Shiicadu ku badanyihiin.
Dhinaca kalena Shiicada ku dhaqan gobolkaa ayaa sheegaya in ay ku adagtahay in ay shaqo ka helaan xafiiisyada dowladda iyo jaamacadaha gobolka ku yaal, isla markaasna gobolkoodu aanu helin maal galin iyo in sidoo kale goobaha ay ku cibaadaystaan had iyo goor laga xiro. Hase ahaatee dowladda Sucuudiga ayaa eedaymahaa beenisay